प्रीयंकाको यस्तो फोटोले किन दुख्छ दर्शकको टाउको ? (भिडियो) - Filmy News Portal Of Nepal
अभिनेत्री प्रीयंका कार्की यतिबेला गर्भवती छिन्। उनको पहिलो बच्चा भएकाले होला प्रीयंका यति धेरै खुसी छिन् भन्दा फरक पर्दैन । उनको पेटमा छोरा या छोरी त्यो त भगवान नै जानुन् । तर प्रियांका आफ्नो बच्चालाई लिएर निक्कै इन्जोय गरेको उनको पछील्लो कृयाकलापबाट बुझ्न सहजै सकिन्छ । यतिबेला संसारको सबैभन्दा खुसी पात्र उनै हुन् भन्दा इुनको तस्बिर अनुसार फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ।
खासमा प्रीयंका पश्चिमा संस्कृतिलाई निक्कै फलो गर्छिन्। नेपालमा कसैले नगरेको चीज प्रीयंकाले गर्छिन् भन्दा फरक फर्दैन । त्यसैले पनि होला उनी ट्रोलको सिकार निक्कै हुने गर्दछिन् । उनी यसो त बोलि चिप्लिएका कारण पनि निक्कै ट्रोल हुने गर्दछिन् । तर हाल उनी गर्भवति भएसंगै सेयर गरेका तस्बिर र क्यापसनले उनको निक्कै खिल्ली उडाउनेको कमी छैन । तर उनी त्यो ट्रोल होस् या उनको प्रसंसालाई उनी सामान्य रुपमा लिन्छिन र झनै अन्य तस्बिर पोस्ट गर्दै ट्रोल गर्नेको मुखमा बुझो पनि खद्ने गर्छिन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नले हालै सेयर गरेको तस्बिरलाई लिएर पनि उनको खिल्ली उडाउनेको कमी थिएन । तर खासै खिल्ली नै उडाउनुपर्ने तस्बिर निहालेर हेर्दा केही देखिन्न । एउटी आमाले आफ्नो बच्चासंगै रमेको नबुझ्ने भन्दा पनि नबुझेझै गर्नेको कमिले पनि होला अहिले उनको खिल्ली उडाउनेको लर्को लागेको । खासमा यस तस्बिरमा उनले आफुले खाएको खाननेकुरा आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाले पनि संगै खाईरहेको हुन्छ भनेर चित्रण गर्न खोजेकी थिईन् । तर उनको त्यो तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा निक्कै भाईरल भएको देख्न सकिन्छ र सकरात्मक् नकरात्मक दुबै कमेन्ट देख्न पनि सकिन्छ । अहिले आम नागरिकले समेत् बेबी बम्प देखाउन थाले प्रीयंका त चर्चित सेलिब्रेटी ।। यती फोटो खिच्नु उनको लागि कुन ठुलो कुरा भयो र? खासमा किन टाउको दुख्छ आम नागरिककै ? कमेन्ट गर्नुस् :